Nlele Nyocha Nyocha na Nchịkọta Google | Martech Zone
The Yahoo User Interface Library nwere mfe taabụ njikwa nke ahụ na-enye gị ohere ibipụta otu peeji nke ejiri ọdịnaya ahụ tinye n'ọtụtụ taabụ. Njikwa ahụ na-arụ ọrụ site na iji ndepụta edetu na akara ngosi akara aha.
iji Google Analytics, Ọ dị nnọọ mfe ịgbakwunye usoro nsuso peeji nke na taabụ ọ bụla. N'ime arịlịka mmewere na nke ọ bụla ndepụta ihe, Itinye ihe onclick omume na-agbakwụnye na peeji nke anya ka a virtual page.
Can nwere ike hazie ụzọ dị na nkwupụta ọ bụla ịchọrọ.
Iji hichaa peeji ahụ, M ga-agbanye peeji nke maka ndabara taabụ mgbe ibe ahụ mepere ebe ọ bụ na mmadụ niile ga-elele taabụ ahụ mgbe ha mepee ibe. Nwere ike ime nke a na a aru onload omume kama onclick omume eji na njigide (a) mkpado.
Jiri nchịkọta Ndetu Ọdịnaya na nchịkọta Google na ị nwere ike ịnyagharịa na ibe gị (ma ọ bụ nyocha na "taabụ") wee lelee ojiji na echiche nke ọdịnaya gị.
Tags: Ajaxnwude ndun'ibu ibuụdị ndọdaibumobile tinye-na-cart udunhazi ịkwụ ụgwọ ekwentịakwụkwọ mpịakọtaelekọta mmadụ ibe edokọbarampịakọta windoụdị WordPress
Nov 15, 2011 na 9:56 PM
Nov 15, 2011 na 9:58 PM